NeNe Leakes inopa hukuru hukuru pane murume kenza kuongororwa - Nhau
NeNe Leakes inopa hukuru hukuru pane murume kenza kuongororwa
NeNe Leakes uye murume wake, Gregg, vari kupemberera - Haana gomarara!
'Tarisa kuna Mwari! Isu tafara kwazvo kuti titi, takaona vanachiremba nezve mhedzisiro yaGregg's Pet Scan yaakatora vhiki rapfuura! Muedzo wekuratidzira, Mirira Izvo .. .. TINO CANCER YEMAHARA !!! Hongu Mwari!, 'Akatora chinyorwa chemurume wake akabata chikwangwani chinoti,' Hapana Cancer Yakawanikwa! Rumbidza Mwari… '
ko khloe kardashian akarasikirwa sei nehuremu
Tarisa kuna Mwari! Isu tafara kwazvo kuti titi, takaona vanachiremba nezve mhedzisiro yaGregg's Pet Scan yaakatora vhiki rapfuura! Muedzo wekuedzwa, Chimirira Iwo .. .. TINO CANCER YEMAHARA !!! Hongu Mwari! Iye zvino ndinogona kuenda kunopa Gregg ziso dema nekuti vazhinji vanofunga kuti anoshungurudzwa #fuckcancer #fuckopinions #cancersurvivor #pushthrucaretaker # lifeoftheleakes
Chinyorwa chakagovaniswa na Nene Leakes (@neneleakes) musi waMay 13, 2019 pa9: 58 am PDT
Gregg zvirokwazvo akange aine kunzwa kwakanaka nezvechirwere chake nguva pfupi yadarika, achinyora pa Instagram svondo rapfuura, 'Inguva yakwana yekudaidzira Kukunda… .Mwari Murapi & Ndinotenda…
Inenge nguva yekudaidzira Kukunda…. Mwari Muporesi & Ndinotenda…
Chinyorwa chakagovaniswa na Gregg Leakes (@greggleakes) musi waMay 8, 2019 pa8: 18 am PDT
Gregg akatanga kubatwa nekenza muna Chikumi 2018. Panguva iyoyo, ivo 'Vechokwadi Vemadzimai eAtlanta' nyeredzi vakati murume wavo aive neStage 3 cancer yekoloni.
Muna Kubvumbi, Gregg akapedza mwedzi mitanhatu yekemotherapy.
NeNee ari kunyatso kufadzwa nhasi, imba yake yanga iri nzira ine matombo uye ichisanganisira kusavimbika makore apfuura kunaGregg, chimwe chinhu chaakabvumidzwa. Kenza yake yaive rondedzero huru pa'Vadzimai vemba 'sezvo makamera akabata muchato wevaviri ava uchinetseka nekuda kwebasa raNeNe semuchengeti.
aziz ansari musikana serena campbell
Getty Mifananidzo North America
MunaNovember 2018, NeNe akapwanya murume wake pa Twitter, kumudana 'zvakaipa, kugunun'una uye zvakaipa.'
Izvo zvese zvakatanga mushure mekunge Gregg akagovana skrini ye 'Hama Zuva' rezvaanonzwa kuti 'murume chaiye' ndizvo.
ndiani mukadzi waSean hannity?
NeNe haana kusevha mazwi mukupindura kumashure, 'Zvakanaka iwe unofanirwa kuita zvese zvawakatumira! Dzidzira zvaunoparidza '.
Iyo chaiyo TV nyeredzi yakazoitevera pamwe nekumwe kutaura kwekunyepedzera, ichinyora, 'Unofanira kuzvinamatira iwe pachako! Izvi zvinoreva, kugunun'una, zvinhu zvakaipa zvauri kudhonza mazuva ano HAZVINONAKA. '
NeNe naGregg vanogovana vana vaviri. Vaviri ava vakatanga kuroora muna 1997, ndokuzorambana muna 2011. Vakazobatanazve uye akaroorazve muna 2013 . Muchato wakanyorwa paBravo uye wakanzi 'Ini Kurota kwaNeNe: Muchato.'
Ariana Grande achiviga mari muchivande kune vateveri vane mari
Cardi B anogamuchira mwana musikana - tsvaga zita rake!
Ndiani ari sasha cohen akaroora
sacha baron cohen akaroora
vanessa kirby musayendisiti